Wasiiro iyo Xildhibaano Mar kale ka Badbaaday weerar
Jimco, Bisha Afraad 29, 2016 Wakhtiga Geeska Afrika 22:45
Wasiirro iyo xildhibaanno ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa maanta mar labaad ka bad-baaday weerar gaadmo ah oo lagu qaaday gaadiid kolonyo ah oo ay saarnaayeen kuwaasoo marayay meel u dhow degmada Shalaanbood, iyagoo ku sii socday magaalada Muqdisho.
Weerarkan ayaa waxaa la sheegayaa inay ku dhaawacmeen askar ka tirsan dowladda Soomaaliya. Waa weerarkii labaad ee muddo 24-saacadood ah lagu qaado kolonyadan, iyadoo shalay isla meel aaan ka fogeyn Shalaanbood weerar kan la mid ah wafdigaasi loo geystay.
C/qaadir Sheekh Maxamed Siidi oo ah guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose ayaa VOA-da uga warramay sida weerarka maanta uu u dhacay.
Wareysiga Guddoomiyaha Sh Hoose.